Trump: Bilada Nopel-Peac-ka anaa ka mudnaa Aby Ahmed. - NorSom News
Trump: Bilada Nopel-Peac-ka anaa ka mudnaa Aby Ahmed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isaga oo la hadlayo koox taageerayaashiisa ah sheegay in isagu uu sanadkii tagau ee 2019 uu mudnaa in la gudoonsiiyo bilada nabadda aduunka ee Nobel Peace Prize-ka. Balse taas badalkeeda lagu sameeyay xaqdaro, biladiina la gudoonsiiyay qof uu isaga ka mudnaa.
Trump ayaa sheegay inuu maqlay in biladii la gudoonsiiyay nin xukuma wadan uusan magaciisa sheegin, balse loo fasirtay inuu ka wado reysulwasaaraha Ethiopia, Dr Aby Ahmed. Laguna gudoonsiiyay shaqo uu isagu Trump ahaan xoogeeda ka shaqeeyay, abaalkeedana uu lahaa.
Madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaano inuu yahay qof jecel amaanta ayaa dadkii uu la hadlayay weydiiyay: ma ogtihiin inaan anigu sanadkan mudnaa in la i gudoonsiiyo bilada nabada aduunka, balse taas badalkeeda ay siiyeen qof ay sheegeen inuu ku muteystay shaqo aan anigu qabtay? Wuxuu sii raaciyay: Dhib maleh, hadaad idinku ii ogtihiin taas.
Aby Ahmed: Oslo dacwo u diray.
Reysulwasaaraha Ethiopia, Dr Aby Ahmed oo markii ugu horeysay maanta ka jawaabay sheegashada Madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu shaqsi ahaan uusan ka warqabin habraaca loo maro bixinta bilada nabada aduunka. Isaga oo sii raaciyay in hadii uu Trump dacwo ka qabto arintaas, uu dacwo u dirsato Oslo, intii uu Ethiopia isku dhajin lahaa.
Aby Ahmed ayaa bilad ku helay ka shaqeynta heshiiska taariikhiga ahaa ee dhexmaray Ereteriya iyo Ethiopia, sidoo kale inuu dabciyay xiriirka sii xumaanayay ee Masar iyo Ethiopia. Isaga oo lagu amaanay inuu xabsiyada Ethiopia kasoo daayay boqolaal maxaabiis ah oo u xirnaa arrimo siyaasadeed.
Xigasho/kilde: Fredsprisvinner Abiy: – Trump bør klage til Oslo
Previous articleTV-ga CNN oo 2,4 bilyan magdhow ah kula heshiiyay wiil ay muuqaal qaldan ka gudbiyeen.
Next articleNRK oo war aan sax aheyn ka qoray kiiska Yaasmiin Kristensen.
Booliska: Awood uma heyno inaan dabagalno dadka aan xiran marada afka.
Wasiirka caafimaadka oo amaanay soomaalida.
Dowlada oo joojisay app-kii loo sameeyay la socoshada dadka uu ku dhacay Corona
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)